Sidee ugufiican Qoraallada Blog-ka ay kaaga dhigayaan kuwa aad u jecel Martech Zone
Waayahay, cinwaankaasi wuxuu noqon karaa mid yar oo marin habaabin ah. Laakiin waxay heshay dareenkaaga waxayna kugu heshay inaad gujiso boostada, miyaanay ahayn? Taasi waxaa loo yaqaan 'linkbait'. Ma aanan la imaan cinwaanka boostada kulul ee sidan oo kale gargaar la'aan… waan adeegsan jirnay Fikradda Maqalka Maqalka ee Portent.
Dadka caqliga badan ee Astaamo ayaa shaaca ka qaaday sida fikradda matoorka u yimid ahaansho. Waa aalad aad u weyn oo ka faa iideysata farsamooyinka isku xidhka la isku dayay oo run ah:
Ego jillaab - dadku waxay la wadaagaan waxyaabaha marka aad qayliso.
Weerar jillaab - adoo qaadaya weerarka, waxaad kicin kartaa xiisaha.
Kabaha Kheyraadka - kheyraad badan had iyo jeer waa fikrad weyn oo nuxur leh!
Jillaab news - mowduucyada isbeddelka ku keena qasabno badan.
Jillaab diidmo - abuur dood oo naftaada ayaa heshay jaanis lid ku ah.
Humor jillaab - Waxaad aqrinaysaa qoraalkan, sax?
Cinwaannada ayaa muhiim u ah waxyaabaha aad ka kooban tahay. Waxa aan ugu jecelahay aaladdan ayaa ah inaysan si aan kala sooc lahayn u soo bixin cinwaan, waxay kaloo sharraxaysaa sababta cinwaanku ugu shaqeynayo isku xidhka 'linkbait'. Maaha wax hagaagsan markasta, laakiin waa wax lagu farxo oo waxay la timaaddaa fikrado cabsi leh oo ku filan oo qoraalkan looga qoro!
Iskuday Generator Fikradda Mawduuca Bilaashka ah
Tags: matoor fikradeedfikrad dhaliyahalinkbaitfarsamooyinka isku xidhkadhali
Badhannada Caajiska ah ee Bulshadu ku badan tahay oo leh 'Socialite.js'
Natiijooyinka Sahanka CMO